Kugara neInvestment yeRussia uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muRussia ye:
● Kugara nekudyara muRussia
● Ugari nekudyara kubva kuRussia
● Visa yegoridhe muRussia
● Pasipoti yechipiri kubva kuRussia
● Kugara nekudyara kweRussia nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muRussia uye Magweta e Kugara neInvestment muRussia uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muRussia zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nevemaInvestment vamiririri kuRussia kunopa mabasa ekugara nekudyara muRussia, Kugara nehurongwa hwekudyara muRussia, Kugara nehurongwa hwekudyara muRussia, kwechipiri Kugara nekudyara muRussia, huviri Residency nekudyara muRussia, ugari uye ugari nekudyara muRussia. , Kugara zvechigarire nekudyara muRussia, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muRussia, Kugara nehurongwa hwekudyara muRussia, Kugara nehurongwa hwekudyara muRussia, Citizenship nekudyara muRussia, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muRussia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muRussia, kechipiri. Citizenship nekudyara muRussia, hunyambiri Citizenship nekudyara muRussia, pekugara uye ugari nekudyara muRussia, ugari uye ugari nekudyara muRussia, hupfumi Citizenship zvirongwa muRussia, Ugari nehurongwa hwekudyara muRussia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muRussia, wechipiri pasipoti muRussia, yechipiri mapasipoti zvirongwa muRussia , chirongwa chechipiri chepasipoti muRussia, mbiri yechipiri pasipoti muRussia, pekugara uye yechipiri pasipoti muRussia, diplomatic yechipiri pasipoti muRussia, yechipiri pasipoti nekudyara muRussia, yechipiri ugari pasipoti, chirongwa chechipiri chepasipoti muRussia, chechipiri pasipoti zvirongwa muRussia, , visa yegoridhe muRussia, vhiza dzendarama muRussia, zvirongwa zvendarama zveRussia, chirongwa chendarama vhiza muRussia, yechipiri vhiza yegoridhe muRussia, yechipiri vhiza yegoridhe vhiza muRussia, mbiri vhiza vhiza muRussia, ugari uye vhiza yegoridhe muRussia, kugara uye yendarama vhiza muRussia, yendarama vhiza ugari muRussia, goridhe vhiza scheme muRussia, yendarama vhiza zvirongwa muRussia.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muRussia nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muRussia ye Residency nekudyara: USD 100,000
Nhanganyaya Russia ne Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveRussia
Russia ndiyo nyika hombe panyika ine zvinopfuura 6,563,736 sq mi. Huwandu hwevanhu hwemamirioni gumi nemakumi mana nematatu, uye musha weguta (Moscow) nevanhu vakapfuma zvakanyanya.
Russia ine musika wechinomwe wakakura kwazvo kumusha uye kutanga muEurope. Hupfumi hweRussia ndewechitanhatu pakukura muNyika muGDP, PPP yakavakirwa, uye yakagara kugara pamusoro pegumi na10 zvichienderana neWorld Bank. Russia yakabatana neWorld Trade Organisation muna 2020. Vari kudzikisira zvipingamupinyi zvekutengeserana nekuvandudza kutengeserana. Musuwo wakazaruka wevanotengesa kunze kwenyika ndeye 2012 World Cup. Inopfuura madhora mapfumbamwe emadhora ichaiswa zviwanikwa mukuvandudza zviteshi zvemhepo, dzimba dzevaeni nemigwagwa, kiriniki, kuchinjana, manejimendi ezvekuchengetedza, uye imwe fomati mumatunhu gumi nematatu anotambira maguta.
Russia ine basa rakakomba uye rine zvipo, uye kuwanikwa kwevanhu vane hunyanzvi chinhu chakanakira kushanda pamwe muRussia.
Vagadziri veRussia munzvimbo zhinji vanotsvaga kushamwaridzana nemakambani asina kujairika kusimudzira kunaka kwenzvimbo. Russia iri kuisa zviwanikwa mubhizinesi reaeronautics, iro rinoda mupiro usina kujairika kurudzi rwekugona, zvinhu, uye software. Iyo US inogovera kuunza kunze ndege, roketi, uye zvikamu zvaro muRussia i86%, mukutenga kwemash yehuni, bepa - 37%.
20% yeRussia inotengeswa kunze inogadzira michina uye Hardware, 10% - zvemagetsi zvigadzirwa.
Chikamu chekuunzwa kweUS muRussia i6% ine kukura kwakagadzikana kwegore. Kukura kwechikamu cheUS mumanyowa ekunze eRussia kwaive 137% muna 2015. Russia iri nepfuti refu nyika hombe panyika. Rudzi rwunofukidza nzvimbo kubva kuEurope kuMadokero kuenda kuNorth America kuEast uye kumhara neAsia muSouth, uye ichiratidzira nzvimbo inoshamisa inopfuura nemunzvimbo gumi neimwe.
Ichisimuka senyika ine assortment mushure menguva refu uye yakakosha nhoroondo, hupfumi hwevatengi hweRussia, nemusika wevanhu vanopfuura mamirioni zana nemakumi mana, iri kufambira mberi kuita nzvimbo yakanaka yekutengeserana. Kuvhurwa kwemabhizinesi kunogona kuwanikwa munzvimbo zhinji dzehupfumi hweRussia uye rubatsiro rwakasimba ruripo kune nyanzvi dzemari kubva kune vehurumende uye vekunze Investment Advisory Council (FIAC). Sekureva kweInvest muRussia, Russia inozvirova nendege kuenderera mberi nekugadzira hupfumi pasi pano. Kubva 140, kusimudzira kweGDP kwawana huwandu hwepakati pe1999% gore rega uye hwasvika pa6.8% muna8.1 (zvichisiyaniswa ne2007-4% yakajairika kusimudzira kwemari pasi). Nekuda kwekusimbisa ruble, mumadhora mazwi 5-1999 GDP kusimudzira kwaishamisa 2007% gore rega rega, inodarika mwero webudiriro yepasi rose. MaRussia, kazhinji, anotenga mune zvepfungwa zvinofambisa kuenzana, kunyorerana, uye chinzvimbo chinowanzodiwa mubhizinesi, uye "chibvumirano" chinowanzoonekwa semusuwo wakazaruka webhenefiti yakafanana yakagovaniswa. Kubatana kweumwe neumwe kwakakoshawo muRussia. Ndichiri kushanda pamwechete muRussia zvinokodzera kuisa nguva pekutanga mukuita kuchengetedzeka kwakasimba, sezvo izvi zvimwe zvichizoumba chikonzero chakasimba chekutaurirana zvebhizimusi mune ramangwana. Iko kune kusinga zivikanwe kugona mumusika wevasungwa weRussia wevanhu vanopfuura mamirioni zana nemakumi mana avo mihoro iri kuramba ichivandudza. Zvakare, chimiro chakasimba chekurairidza cheRussia chawana mukurumbira wekuendesa vashandi vane tarenda zvakanyanya uye vanoziva vatengi. Kugona kweruzhinji rweRussia kuri pachena pachena mune zvakaitwa neRussia basa, mimhanzi, kunyora, uye kuvaka. Kuvapo kukuru kweRussia kwegeological kunoyambuka chinhambwe chisingaenzaniswi nedzimwe nyika imwe chete. Kubatanidza Europe neAsia uye kumhara kuchamhembe kweAmerican mainland, Russia ine yakanakisa kupinda kune gungwa, mugwagwa, uye njanji makosi uye iri kumusha kune mashoma akakosha emota terminals. Dunhu reRussia rinowedzerwazve nehukuru hwayo hwakajairika zviwanikwa zvezvitoro zvemaminerari, marasha mineshafts, gasi rinopisa, nematanda. Russia inharaunda yakasangana, ine mweya wakagovaniswa pamwe unobva mune yayo yezviitiko uye mamiriro. Nguva yechando yakanyanyisa yeRussia nemamiriro ekunze zvakaratidza kuti kushanda pamwe chete, pachinzvimbo chekukwikwidza kwave kwakakosha pakutsungirira. Kunzwa kwekubatana-kuita uye kuwirirana kunofanirwa kutariswa panguva yekushanda pamwe chete muRussia, kunyanya kana uchitaura nevabatsiri veRussia Semuenzaniso, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekugadzirisa iko kuungana panzvimbo pemunhu.
Masangano epasirese anokwanisa kubatsirwa gigantically kubva pane zvakanakira pamusoro zvekushanda pamwechete muRussia. Kushandisa izvi zvakanakira kunoperekedza chinodikanwa chekuita masisitimu anoshanda ekuongorora mamiriro enzvimbo, zvematongerwo enyika, uye zvemagariro zvetsika dzeRussia. Izvi zvinoda nzwisiso yakakura yebhizinesi reRussia uye tsika nemagariro pamatanho ese.
Masangano epasirese anoshandisa vanhu muRussia kana kushanda neRussia nguva dzose anofanirwa kutora chikamu mukugadzirira zvirongwa zvebhizinesi uye bhodhi, semuenzaniso, Kuita Bhizinesi muRussia kuvimbisa kuti vanovaka kugona kugona kunyatsogadzirisa misiyano mizhinji yemagariro mukuita zvishuwo, hunhu uye tsamba dzemitauro.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeRussia
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muRussia
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Rashiya
Kugara nekudyara kweRussia
Bhizinesi investor visa (inoshanda kwemakore 1,2,5)
Processing nguva yeResidency nekudyara kweRussia
Mushure memakore matatu kusvika mashanu ekugara zviri pamutemo (mutauro wechiRussia unodiwa)
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veRussia
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweRussia
Kutsvagisa & Kugadzira
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweRussia
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents yeRussia uye Residency ne Investment Lawyers yeRussia inopa vatengi uye mhuri dzavo muRussia nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuRussia, kugara nekudyara kubva kuRussia uye nemimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuRussia kana Golden Visa kubva kuRussia kana ugari nekudyara kubva kuRussia kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuRussia, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kumisikidza kambani mu Russia kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muRussia uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuRussia nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha kuvagari veRussia:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeRussia, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeRussia, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuRussia, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuRussia, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara eRussia uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa femu yeRussia.
Kugara nekudyara kubva kuRussia kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muRussia kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuRussia kuenda ku37 Nyika.
Pasipoti yechipiri kubva kuRussia kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuRussia kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuRussia.
Goridhe visa zvirongwa muRussia kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuRussia kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuRussia kuenda ku37 Nyika.
Zvirongwa zvebhizinesi rekupinda kubva kuRussia kuenda ku106 Nyika.
Kugara neInvestment yeRussia kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muRussia nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muRussia, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweRussia. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muRussia vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muRussia, kutora zvakanakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba zvirongwa zveRussia nemari yekudyara muzvivakwa muRussia.
Unoda kuziva - Russia Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuRussia kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuRussia. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuRussia inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti ubve kuRussia kana kuRussia, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweRussia kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeRussia uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira Russia, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kuRussia isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuRussia. Magweta edu akasarudzika eResidency nekudyara kweRussia uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuRussia zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neRussia.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweRussia changobvumidzwa, tinogovana newe nhau dzakanaka uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muRussia kune vakataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muRussia:
Residency nebasa rekudyara kweRussia hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vagoveri vezvombo uye zvombo kubva kana kuRussia.
Residency nemapurogiramu ekudyara kweRussia hazvipi kupihwa kweTechnical surveillance muRussia kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuRussia.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweRussia hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muRussia.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeRussia haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muRussia.
Residency nebasa rekudyara kweRussia haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muRussia.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweRussia haruwanikwe kune vanhu veRussia vanobata mukutengesa, kuchengetedza muRussia, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeRussia haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeRussia haisi yezvitendero uye masangano avo muRussia.
Residency nebasa rekudyara mu Rashiya haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muRussia.
Kugara Kwedu magweta muRussia haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muRussia.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veRussia neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muRussia kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara muRussia.
Kugara nekudyara muRussia nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muRussia yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muRussia.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa neRussia, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kweRussia inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheRussia.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuRussia kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuRussia.
Vanoziva Kugara nevekutsvaga mari kuRussia nevamiriri vepamutemo kuRussia vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veRussia kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuRussia uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuRussia
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Russia, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuRussia kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuRussia
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweRussia ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veRussia, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweRussia nedzimwe mhosva.
mhando vhiza yeRussia
Maitiro Ekubvumidza Basa kuRussia
Kwekugara kwenguva pfupi muRussia
Permanent Residence muRussia
Embassies uye ma Consulates eRussia
Kugara neInvestment muRussia uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muRussia nezve pakarepo kana mune ramangwana zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kuenda nemhuri yako kuRussia nekudyara mari, isu semumwe wako kuRussia, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muRussia nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekudyara kwekudyara kweRussia, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muRussia, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eRussia zvichitigadzira one-stop shop yeRussia nenyika 106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reRussia mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweRussia nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muRussia nekunze.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muRussia kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muRussia inodhura nesu.)
Akaundi yeBhangi muRussia
Chero ani investor anotamira kuRussia angangoda akaundi yebhangi muRussia uye account yebhangi yekambani muRussia, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muRussia
Kana iwe uchida kubvunza muRussia, ye mhinduro dzemadhijitari muRussia kunge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muRussia kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Russia kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muRussia kutanga pakarepo muRussia.
HR Services muRussia
Our kambani yevashandi muRussia inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muRussia vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeRussia
Bhizinesi foni nhare dzeRussia pamwe ne nhamba dzeRussia Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muRussia
Accounting, kushingairira kwakakodzera muRussia uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muRussia
Setup bhizinesi muRussia
Mushure meResidency nekudyara kuRussia, setup bhizinesi mu Rashiya.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muRussia
Kugadzira Webhu muRussia
Ecommerce Kuvandudza muRussia
Webhu kuvandudza muRussia
Kuvandudza kweBlockchain muRussia
App Kubudirira muRussia
Software Kubudirira muRussia
Magweta e Residency neInvestment muRussia
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuRussia uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuRussia, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeRussia ine vamiririri vakanakisa vekupinda zvakare muRussia, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa mutengi sevhisi yeRussia ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro kune vanhu veRussia nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara yeRussia inopa yakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweiye Mutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuRussia, pane mvumo yekugara muRussia yabvumidzwa.
Simba regweta reRussia rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevemagweta ekudyara muRussia. Kana iwe uri muRussia kana kuronga kushanyira Russia, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadharise zvimwe kuti tiwane Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweRussia zviri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe munharaunda yeRussia. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weRussia.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muRussia
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muRussia?
Kugara nekudyara kuRussia, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweRussia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweRussia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kugara kwekugara nekudyara kuRussia, kugaramo nehurongwa hwekudyara kweRussia. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuRussia, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muRussia, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muRussia uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kuRussia, vachishanda zvakanyanya kugarwa nevamiririri vezvekudyara muRussia, uye akanakisa mafemu ekushambadzira. muRussia.
Kugara nemabasa ekudyara kweRussia | Kugara nevamiriri vezvekudyara muRussia | Kugara nemagweta eInvestment muRussia | Kugara nemagweta ekudyara muRussia | Kugara nevanoona nezvekudyara kweRussia
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muRussia?
Ugari nekudyara kuRussia, hunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweRussia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweRussia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muRussia. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuRussia, ugari nehurongwa hwekudyara kweRussia inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuRussia, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muRussia, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muRussia uye ugari hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kweRussia. kuva mugari wemo wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muRussia, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muRussia.
Affordable Investor immigration services yeRussia | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika muRussia | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muRussia | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muRussia | Anodhura investor vanoona nezvekupinda munyika yeRussia | Affordable immigration law firms kuRussia
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muRussia?
Yechipiri pasipoti muRussia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weRussia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweRussia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuRussia, yechipiri pasipoti chirongwa cheRussia inotsigirwa ne wechipiri pasipoti masevhisi eRussia, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirose muRussia, magweta echipiri epasipoti muRussia uye akanakisa echipiri mapasipoti eRussia, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muRussia, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muRussia.
Chechipiri pasipoti masevhisi eRussia | Chechipiri pasipoti vamiririri muRussia | Yechipiri mapasipoti magweta muRussia | Yechipiri mapasipoti magweta muRussia | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuRussia
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muRussia?
Ndarama vhiza muRussia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara muRussia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweRussia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuRussia, chirongwa chendarama vhiza yeRussia inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eRussia, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muRussia, akanakisa egoridhe vhiza magweta muRussia uye akanakisa endarama vhiza varairidzi kuRussia, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muRussia, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muRussia.
Goridhe visa services yeRussia | Ndarama vhiza vamiririri muRussia | Magoridhe vhiza magweta muRussia | Magoridhe vhiza magweta muRussia | Goridhe vhiza vanopa mazano kuRussia
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muRussia?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muRussia iUS $ 100,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuRussia yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muRussia nevamiriri muRussia vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muRussia.
Kugara nekudyara kuRussia kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuRussia uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuRussia ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzana yeResidency neInvestment kuRussia, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveResidency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuRussia kana investor visa kuRussia?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuRussia kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuNepal, Kugara nekudyara kuRussia kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuRussia kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeRussia
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuRussia
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeRussia
Federal Agency Yekutsigira Kwekushandisa- http://www.rosnedra.com
Nheyo yeKubatsira Kumabhizimisi Madiki Ekuvandudza (FASIE) - http://www.fasie.ru/
Indo-Russian Science uye Technology Center (IRSTC), Moscow Branch- http://www.ristc.com
Russian Academy yeSainzi (RAS) - http://www.ras.ru
Bazi rezvekurima reRussian Federation, - http://www.mcx.ru
Russian Corporation yeNanotechnologies (RUSNANO) - http://en.rusnano.com
Russian Academy yeUinjiniya- http://www.info-rae.ru/
Federal Service pane Zvekutarisisa mune Hutano uye Hwekuvandudza Kwevanhu- http://www.roszdravnadzor.ru/en
Federal Yekudyidzana Agency (ROSSVYAZ) - http://eng.rossvyaz.ru
Federal Agency yeSainzi Masangano (FASO Russia) - http://fano.gov.ru/en/
Russian Foundation Yekutanga Kudzidza (RFBR) - http://www.rfbr.ru/rffi/eng/about
Federal Service Pamusoro Pekodzero dzeVatengi Kudzivirirwa Uye Kuonekwa Kwevanhu Zvakanaka (ROSPOTREBNADZOR) - http://rospotrebnadzor.ru/en/web/en
Federal Kurapa-Biological Agency- http://fmbaros.ru/
Bazi rezvehutano reiyo Russian Federation- http://www.rosminzdrav.ru
Iyo Federal Service yeEcological, Technological uye Nuclear Supervision (GOSNADZOR) - http://en.gosnadzor.ru/
Ural Bazi reRAS- http://www.uran.ru
Ministry ye Natural Natural uye Nharaunda yeiyo Russian Federation- http://www.mnr.gov.ru/english/
Iyo Federal Service yeKutarisa kweKutaurirana, Ruzivo Technology uye Kutaurirana (Roskomnadzor) - http://www.rsoc.ru
Federal Service for Kutarisirwa kweDzidzo neSainzi (ROSOBRNADZOR) - http://www.obrnadzor.gov.ru
Federal technical Kudzora uye Metrology Agency (Rosstandart) - http://www.gost.ru/wps/portal/pages.en.Main
Far Eastern Bazi reRAS- http://old.febras.ru/index_.html
Federal Service Yekutarisa Kwezvisikwa- http://rpn.gov.ru
Federal Sevhisi yeHydrometeorology uye Yekutarisa Yezvakatipoteredza (ROSHYDOMET) - http://www.meteorf.ru/
Siberian Bazi reRAS- http://www.sbras.ru/en
Ministry of Kutaurirana uye Misa Kutaurirana kweRussia Federation- http://minsvyaz.ru/en/
Ministry of Energy yeRussian Federation- http://minenergo.gov.ru/en
Ministry of Dzidzo & Sayenzi yeRussia Federation (RMES) - http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
Federal Agency yeMvura Zviwanikwa- http://voda.mnr.gov.ru
Link to Dhipatimendi Rekupinda muRussia , ane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muRussia